Life style | Rochak Khabar
२२ वर्षीया युवती हुँ । मैले अहिलेसम्म यौन सम्पर्क राखेको छैन । मेरा अधिकांश साथीहरूले यौन सम्पर्क राखिसकेका छन् । कतिपयले विवाहअघि र कतिपयले विवाहपछि यौन सम्पर्क राखेको गफका क्रममा बताउँछन् । उनीहरूको पहिलो सेक्सको अनुभव फरक–फरक खालको छ । मलाई पहिलोपटक स...
26 Dec, 04:03 AM
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाई...
24 Dec, 04:08 AM
यौनसम्पर्क भएपछि मलाई शंका लाग्छ म औषधी खान्छु । यी औषधी धेरै खाँदा केही हुन्छ कि?
23 Dec, 10:39 AM
सुरुका दिनमा जस्तो जोस आउँदैन म ३४ वर्षीय विवाहित तथा एक छोराको पिता हुँ । विवाह भएको ११ वर्ष भयो । मलाई अहिले सुरुका दिनमा जस्तो सेक्स इनर्जी आउँदैन अनि शुक्रकीट पनि कम उत्पादन भएजस्तो महसुस हुन्छ । किनभने हिजोआज एक रातमा ३ पटकभन्दा बढी यौनसम्पर्क गर्न गाह्रो महसुस हुन्छ । के कारणले...
18 Dec, 03:50 AM
पहिलो यौन सम्बन्धका बारेमा के सोच्छन महिला ? स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहने देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता कस्ता कुरा सोच्छन् भन्ने वि...
13 Dec, 06:58 AM
सेक्स गर्दा तपाईंको बृय छिटो खस्छ भने टेन्सन नलिनुहोस यस्तो छ घरेलु औषधी
11 Dec, 04:01 AM
बच्चा जन्माउनका लागी सेक्स गर्ने ६ वटा उत्तम तरिकाहरू.
11 Dec, 03:53 AM
सेक्स नगर्ने पुरुषको यसरी ज्यानै जान सक्छ!
ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एउटा रिपोर्टले सेक्स नगर्ने पुरुषको ज्यान पनि जान सक्ने खतरा औल्याएको छ ।
जुन पुरुष महिनामा एकचोटी पनि सेक्स गर्न सक्दैन्, उनको ज्यान जाने सम्भावना हप्तामा एक चोटी सेक्स गर्नेको तुलनामा दुई गुणा बढी हुन्छ ।
11 Dec, 03:46 AM
यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिल...
10 Dec, 03:43 AM
किन महिलाहरूको योनीमा जी स्पट हुन्छ ? आखिर के हो जी स्पट ?
योनीमार्गको अघिल्लो भागमा तथा पिसाब खुल्ने प्वालको साइडमा हुने एकदेखि तीन इन्च लामो सिमी आकारको भागलाई ग्राफेनबर्ग स्पट भनिन्छ । यसलाई छोटकरीमा जी स्पट पनि भनिन्छ । जी स्पटलाई महिलाको सर्वा्धिक उत्तेजनाको क्षेत्र पनि मान्ने गरिन्छ । जी स्पटबारे सन् १९४० द...
6 Dec, 04:08 AM